Any UK, Belzika, Alemaina, Holandy ary Repoblika Tseky izao no misy ny Omicron COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Any UK, Belzika, Alemaina, Holandy ary Repoblika Tseky izao no misy ny Omicron COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Tseky • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Ireo firenena 27 mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana dia nanaiky hampiato vonjimaika ny zotra an'habakabaka avy amin'ny firenena fito any atsimon'i Afrika. Ny UK, Etazonia ary Kanada dia nametraka fameperana mitovy amin'izany ihany koa.
Royaume-Uni dia nanoratra tranga roa voalohany tamin'ny variana Omicron vaovao an'ny COVID-19 iray andro taorian'ny tranga voalohany tamin'ilay ratra, izay ahiahin'ny mpahay siansa fa mety ho areti-mifindra kokoa, voarakitra any Eropa.
Androany, ny mpitondra tenin'ny minisiteran'ny Fahasalamana Czech dia nanambara fa vehivavy iray niverina avy nanao vakansy tany Egypta dia nizaha toetra tsara ho an'ny zavatra inoana ho variana vaovao momba ny COVID-19. Nampiany ihany koa fa ny santionany dia mianatra bebe kokoa, miaraka amin'ny fanamafisana ofisialy ny alahady maraina.
Manamafy amin'ny fomba ofisialy ny fahatongavan'i Omicron ao amin'ny kaontinanta Eoropeana ihany koa ny manampahefana Belzika sy Alemana.
Nifanindran-dalana tamin’io tatitra avy amin’ny Repoblika Tseky io, Kai Klose, minisitry ny raharaha sosialy sy ny fampidirana ao amin’ny GermanyNy faritr'i Hesse, dia nibitsika fa ny "varian'ny Omicron dia efa tonga any Alemaina, miaraka amin'ny ambaratonga avo dia avo." Nambaran'i Klose fa "miovaova maromaro mampiavaka ny Omicron no hita tamin'ny olona avy any Afrika Atsimo" tamin'ny zoma alina. Napetraka ao anaty confinement ilay olona miandry ny filaharan'ny viriosy hita ao amin'ny santionany.
Niatrika raharaha Omicron be dia be ny manam-pahefana any Holandy tamin'ny zoma, raha olona 61 tonga tany Amsterdam avy any Afrika Atsimo no nizaha toetra tsara ho an'ny COVID-19. Nentina avy teo amin’ny seranam-piaramanidina nankany amin’ny hotely teo akaiky teo ireo mpandeha ary nitoka-monina tao. Nilaza ny Minisiteran'ny Fahasalamana Holandey fa ny santionany dia ianarana “haingana araka izay azo atao [mba hahitana raha izy ireo no variana vaovao mampanahy, antsoina ankehitriny hoe 'Omicron'."
Talohan'io andro io, noraràn'ny governemanta holandey ny fitsangatsanganana an'habakabaka rehetra avy any Afrika Atsimo izay nahitana voalohany ilay ratra vaovao. Tsy maintsy nandany ora maro teny amin’ny lalamby ireo mpandeha tamin’ireo sidina roa farany tonga avy any, niandry ny hanaovana fitiliana.
Belzika dia manana fanavahana mampiahiahy amin'ny maha-firenena voalohany any Eropa nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny raharaha Omicron. Ny minisitry ny fahasalamana ao amin'ny firenena, Frank Vandenbroucke, dia nanambara ny alakamisy fa ny marary voan'ny aretina dia olona tsy voan'ny vaksiny izay nanao fitiliana tsara ho an'ny COVID-19 tamin'ny 22 Novambra. Araka ny filazan'ny lehiben'ny virologista any Belzika, Mark Van Ranst, dia niverina avy tany Ejipta ilay mpanao fialan-tsasatra.
Omaly, ny Ivon-toerana Eoropeana misoroka aretina sy fanaraha-maso (ECDC) dia nampitandrina fa mbola misy ny "fisalasalana lehibe mifandraika amin'ny fifindran'ny aretina, ny fahombiazan'ny vaksiny, ny mety hisian'ny reinfections ary ny fananana hafa amin'ny variana Omicron." Ny manam-pahefana ara-pahasalamana EU dia nanasokajy ny tebiteby ho "avo ka hatramin'ny avo indrindra".
Tamin'io andro io ihany, ny firenena 27 mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana dia nanaiky hampiato vonjimaika ny zotra an'habakabaka avy any amin'ny firenena fito any atsimon'i Afrika. Ny UK, Etazonia ary Kanada dia nametraka fameperana mitovy amin'izany ihany koa.